किन औँला चुस्छन् बालबालिका ?
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४५२२ जनामा कोरोना पुष्टि
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तामाङ पदमुक्त
गण्डकीमा ‘कोरोना फ्रन्टियर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ दिईने
उपत्यकामा बार तोकेर पसल सञ्चालन, निजी सवारीमा जोरबिजोर
भारतमा चार महिनायताकै सबैभन्दा कम सङ्क्रमित
प्रायः बालबालिकाले हातका औँला चुस्ने गर्छन् । यो बानी बालबालिकाका लागि सामान्य हो । तर के कारण ले र किन औला चुस्छन् भन्ने कुरा बहेरक अभिभाकले जान्नु जरुरी छ ।कतिपय औँला चुस्ने बच्चाका अभिभावकलाई यो ठूलो चिन्ताको विषय हुन्छ । किनकि, यही बानीका कारण कैयौँ शारीरिक समस्या पनि निम्तिन सक्छ । उनीहरूको यस्तो लतलाई समयमै छुटाउन नसके यसले गलत परिणाम पनि ल्याउन सक्छ ।त्यसैले बेललेका सचेत हुनुपर्छ ।काएको अवस्थामा दूध वा कुनै खानेकुरा नमिलेको अवस्थामा बालबालिकाले आफ्ना औँला चुस्न सुरु गर्छन् ।त्यसै गरी आरामका लागि पनि बालबालिकाले औला चुस्ने गर्छन् ।
उनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ स्ट्रेसको अनुभूति गर्छन् । त्यसैले आफूलाई कम्फर्ट पार्न पनि उनीहरूले औँला मुखमा राख्छन् ।ठूला मानिसलाई मात्र तनाव हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ रु यदि यस्तो सोचिरहनुभएको छ भने गलत हुनुहुन्छ । जब तनाव हुन्छ, तब मानिसमा भोक मरेर जान्छ । कतिपयलाई तनावको अवस्थामा अझ बढी भोक लाग्ने गर्छ । बालबालिकामा पनि यस्तो स्थिति आउँछ । जुनकुनै वेला बालबालिका तनावमा हुन सक्छन् । त्यति वेला बालबालिकाले कुनै न कुनै प्रकारको खाना खोज्न सक्छन् ।
अनि कुनै खानेकुरा नभेट्दा उनीहरूले औँला चुस्ने गर्छन् ।कहिलेकाहीँ सुरक्षा पाउन पनि बालबालिकाले औँला चुस्ने गर्छन् ।जब बालबालिकाले एक्लो महसुस गर्छन् अनि औँला चुस्न सुरु गर्छन् । त्यसैले सकेसम्म लामो समय बच्चाको साथमा बिताउने प्रयास गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ टाउको पनि हल्लाइदिनुपर्छ । ताकि बालबालिकाले मुखमा औँला हाल्नबाट बचोस् ।
छोटो–छोटो समयमा तपाईंले आफ्ना बालबालिकालाई कुनै न कुनै खानेकुरा दिनुपर्छ । उनीहरूको उमेरअनुसार फलफूल, दूधलगायतका खाद्यपदार्थ दिन सकिन्छ । ताकि बच्चाको पेट भरिएर मुखमा औँला राख्न छोडोस् ।बच्चाको औँलामा कागती र निमको रसको पेस्ट बनाई दलिदिन पनि सक्नुहुन्छ । यसको स्वाद नमिठो हुने भएकाले बच्चाले मुखमा औँला राख्ने बानी छुटाउन सक्छ ।
बच्चा राति किन रुन्छन् ? यस्ता छन् कारण
बच्चाको आँखामा लाग्ने क्यान्सर (रेटिनोब्लास्टोमा) के हो ? कसरी गर्ने घरमै परीक्षण
नवजात शिशुको यौनांग कसरी सफाई गरिदिने ?
नवजात शिशुको स्याहार कसरी गर्ने
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४५२२ जनामा कोरोना पुष्टि १२ घण्टा पहिले
बच्चा राति किन रुन्छन् ? यस्ता छन् कारण महिला स्वास्थ्य
बच्चाको आँखामा लाग्ने क्यान्सर (रेटिनोब्लास्टोमा) के हो ? कसरी गर्ने घरमै परीक्षण महिला स्वास्थ्य
नवजात शिशुको यौनांग कसरी सफाई गरिदिने ? महिला स्वास्थ्य
नवजात शिशुको स्याहार कसरी गर्ने महिला स्वास्थ्य
किन खाना खाने बित्तिकै पानी पिउन हुँदैन ? मंगलबार, असार १, २०७८
कागती पानी पिउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु मंगलबार, असार १, २०७८
कस्ता व्यक्तिले माछा भुलेर पनि खानु हुदैन मंगलबार, असार १, २०७८
कस्ता व्यक्तिले नखाने अदुवा मंगलबार, असार १, २०७८
किन सास गन्हाउँछ, कसरी छुटकारा पाउने ? मंगलबार, असार १, २०७८
स्वास गनाउने समस्या भए यसरी छुटकारा पाउनुहोस् सोमबार, जेठ ३१, २०७८